पहिरोका कारण असुरक्षित बन्दै पानीका मुहान «
पहिरोका कारण असुरक्षित बन्दै पानीका मुहान
मनसुन सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोका कारण पानीका मुहानहरु असुरक्षित बन्दै गएका छन् । पहिरोले पानीका मुहान पुर्दा मुहान नै असुरक्षित बन्दै गएका हुन् ।
भू–गर्भविद्हरुले पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको ग्रामीण सडक निर्माणले पहिरोको घटना पनि बढेको बताउँदै यसको कारण पानीको मुहान विस्थापित हुने र स्रोत दूषित बन्दै गइरहेको बताएका छन् । पहिरोविज्ञ डा. रञ्जनकुमार दाहालले पछिल्लो समय पहिरोको घटना बढ्ने क्रममा रहेको र योसँगै कतिपय स्थानमा पानीको स्रोतहरु नै असुरक्षित बन्दै गइरहेको बताएका छन् । “पहिरोका कारण धेरै ठाउँमा असर पुगेको छ, कुनै स्थानमा धमिलो पानी आउने, अर्को कुरा पानीको स्रोतहरु नास हुने घटनाहरु बढी छ,” उनले भने, “मनसुनमा मूलहरु राम्रोसँग फुट्ने छन् यो वर्ष । यो वर्ष पानी धेरै पर्ने भएकाले पहाडी क्षेत्रमा राम्रो पानीको सञ्चिती हुने छ र मूलहरु फुट्न सक्छ । तर व्यवस्थापन भने गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योसँगै पानीको मात्रा धेरै जमिनभित्र पर्न गयो भने पानीको व्यवस्थापन राम्रो हुन सक्छ ।”
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार, पहिरोका कारण पानीका मुहान जोखिममा पर्दै जाँदा खानेपानीका आयोजनाहरु संचालनमा चुनौती हुने र कतिपय खानेपानीका आयोजान रुग्ण अवस्थामा छन् । मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल दासले खानेपानीको स्रोत सुक्दा र कुनै ठाउँमा बाढी पहिरोजस्ता मनसुनजन्य घटनाका कारण नास हुँदा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना संचालन भएको जानकारी गराए ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपसचिव डा. प्रेमा पौडेलले भू–क्षय तथा पहिरोका कारण खानेपानीका स्रोतहरुको व्यवस्थापन तथा संरक्षण चुनौती आएको बताए । “पानीका मुहानहरु कतिपय स्थानमा सुक्दै पनि गएका छन्, कतिपय स्थानमा नयाँ पानीको स्रोत पलाएको हुन सक्छ, बस्तीमा आएको पानीको स्रोत स्थानान्तरण भएर बस्ती नभएको स्थानमा सर्न सक्छ, वा बस्ती भन्दा तल पानीको नयाँ स्रोतको रुपमा उत्पन्न हुन सक्छ ।”
विज्ञहरुका अनुसार पहिरो व्यवस्थापनका साथै खानेपानीको स्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा राज्यले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ । वातावरणमैत्री विकास नहुँदा पहिरोको जोखिम बढिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।